‘पोल-पोलमा सरकार, गाउँ-गाउँमा बलात्कार’! – AayoMail
‘पोल-पोलमा सरकार, गाउँ-गाउँमा बलात्कार’!
आयाेमेल संवाददाता २०७७ असोज १९ गते १५:३८
देशभर बलात्कारका घटना बढ्दै गइरहेको भन्दै दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै जनकपुरमा युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन्। बलात्कारका घटना रोक्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकार असफल भइरहेको भन्दै ‘युथ एलाइन्स अगेन्स्ट रेप’ ले जनकपुरमा प्रदर्शन गरेको हो।
एलाइन्सआवद्ध युवाहरू जनकपुरको जनक चोकमा जम्मा भएर नारा जुलुस प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय गेटमा नारा जुलुस गर्दै उनीहरूले धनुषाको धनुषाधाम–४ की बलत्कृत किशोरी न्याय र बलत्कारीलाई सजाय दिन माग गरेका छन्।
केही दिनअघि धनुषाधाममा एक किशोरीसँग ७/८ जनाले सामूहिक बलात्कार गरेका थिए। बलात्कारमा संलग्न दुईजना पक्राउ परेपनि अन्य फरार छन्। युवाहरूले फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरेका छन्।
पीडित किशोरीको परिवारलाई पैसाको प्रलोभन दिइ घटना मिलाउन खोज्ने एकजना अभियुक्तका बाबुलाई प्रहरीले केही दिनअघि पक्राउ गरेको थियो।
पोल पोलमा सरकारले आफ्नो प्रशंसाको पोस्टर झन्ड्याइरहेपनि बलात्कारका घटना रोक्न असफल भएको एलायन्सका सदस्य अमितकुमार पाठकले बताए। बलात्कारलगायतका घटना रोक्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन युवाहरूले प्रदर्शन गरेको उनले बताए।